Aventures et vie à Madagascar: Véritable Papier Antemoro
Hanta Nandrianina 15 juillet 2014 à 15:37
Salama, misaotra fa mahafinaritra ny blog-nao. Sendrasendra no nahitako azy, nikaroka teto @ internet fomba fanaovana papier antemoro zah!
Fa hono ho'a rehefa maina ilay taratasy vao apetraka ny voninkazo na izay zavatra hanaingona azy eo amboniny izany raha ny fanazavana etsy ambony! Dia fomba ahoana no hiraiketany? Ary misy fomba atao mialoha ve mba tsy hampiova ny lokon'ny voninkazo? Voninkazo vao notazana fa tsy maina no ampiasaina o.
Misaotra mialoha mamaly! Dia manorata ihany fa mahaliana be, mankasitraka e!
Raha manavanana anao kokoa ny mamaly @ teny frantsay dia tsy maninona nefa inoako fa mahazo teny malagasy ianao!